🥇 ▷ qiimaha suurogalka ah ee Europe sifeeyo »- ✅
Taxanaha aaladda Redmi Note 8 ayaa dhowaan yeelan doonta bandhig caalami ah. Koontada rasmiga ah ee Twitter Xiaomi ayaa horay u sii horumartay suurtogalnimada bilawga maalmo ka hor, laakiin wali ma shaacin waqtiga rasmiga ah taas oo ka dhici doonta. Waxay umuuqataa in bilaabistu ay dhowdahay, sidii la sheegay qaar ka mid ah tafaariiqda reer yurub ayaa horey u liis gareeyay aaladaha. Fuuq bax cusub ayaa muujinaya waxay noqon lahaayeen qiimaha rasmiga ah ee suurtagalka ah ee Redmi Note 8 Pro loogu talagalay suuqa Yurub. Noocaani waa midka la yimaada kamarad 64MP quad ah iyo processor-ka Mediatek Helio G90T oo loogu talagalay ciyaaraha.
Qiimaha macquulka ah ee Redmi Europe Note 8 Pro
Kala shaandheynta cusub ee qiimaha ‘Redmi note 8 Pro’ wuxuu ka yimid Sudhanshu Ambhore. Wariyaha ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in taleefanka laga heli doono labo nooc: 6 GB oo ah RAM + 64 GB kaydinta Waxaan isku dayaa waa la iibinayaa by 259 euro, Y 6 GB oo ah RAM + 128 GB kaydinta gudaha taas noqon wuxuu iibinayaa 289 euro sida ku xusan liiska magacyada dhowr tafaariiqleyaal reer yurub ah. Waqtigan xaadirka ah, qiimaha suurtagalka ah ee Yurub ee heerka ‘Redmi Note 8’ weli waa mid qarsoodi ah.
Dhowr maalmood kahor waxaan aragnay sida qeyb ka mid ah agabyada xayeysiinta ee Redmi ay u daadisay Ogeysiiska 8 Pro suuqyada adduunka. Halkan waxaa ku yaal sharaxaadda astaamaha iyo howlaha ay taleefannadu bixiyaan.
Faahfaahinta taxanaha Redmi Xusuusin 8
Redmi note 8 Pro Waxaa ku jira shaashadda 6.53 inji FHD + LCD oo leh darajo qaab-u eg. Waxaa awood u leh processor-ka cusub ee Mediatek Helio G90T. Waxaa ku shaqeeya batari weyn oo leh awood dhan 4500 mAh. Waxay leedahay 64MP kamaradaha gadaal ee ugu weyn (Samsung ISOCELL GW1), kamarad 8MP aad u weyn, kamarado 2MP ah iyo aaladda moolka sare ee 2MP. Kaameerada hore waa mid 20MP ah.
Astaamaha kale waxaa ka mid ah iskaanka sawirka faraha ee gadaal-u-dhejisan, taageerada labada SIM, Kaarka MicroSD, NFC iyo dekeda IR. Waxay kaloo taageertaa 18W oo deg deg ah iyo 4 + dallac degdeg ah.
Heerka ‘Redmi note 8’ Waxay leedahay shaashad yar oo ah 6.3 inji FHD + oo leh meel ay ku yaalliin 13MP kamarad hore oo lagu habeeyay. Waxaa ku shaqeeya ‘Snapdragon 665 chipset’ oo ay kuxirantahay illaa 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo kayd ah. Qaabeynta afarta kamaradood waa 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Waxay sidoo kale leedahay barta sawirka sawirka faraha ee dusha sare, laakiin ma leh NFC. Waxaa ku yaal 4000 mAh batteriga hoostiisa galaaska gadaashiisa iyada oo lagu taageerayo ku dallacsiinta degdegga ah ee 18W. Labada taleefanba waxay wadaan MIUI 10 oo ku saleysan Android 9 Pie.
note redmiredmi note 8 notemi note 8 noteationsredmi note 8 note proredmi note 8 pro specificredmi note 8 pro globalredmi note 8 pro price Xiaomi